Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့သတ္တိ ကမ္ဘာကိုသိစေခဲ့သည့် အို-၇ တောင်ကုန်း
အမှတ်(၃၅၉)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဒုအရာခံဗိုလ် ကျော်ဌေးဦးစီး အင်အား(၁၀)ဦးနေ၇ာယူထားသော(အို-၇)တောင်ကုန်းအား ယိုးဒယား တပ်မှတပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ ဦးစီး (၂၀)ဦးခန့်မှ နေရာယူတပ်စွဲရန်လာရောက်စဉ်မိမိတပ်မှ မြန်မာ့ပိုင်နက်ဖြစ်ကြောင်း
ပြန်လည်ပြောဆို မောင်းထုတ်ရာမှ ပြန်မဆုတ်ပဲ စခန်းကုန်းရှေ့ ကိုက်(၂၀၀)ခန့်တွင်တပ်စွဲထားပြီး (၇-၁-၂၀၀၁)ရက်နေ့တွင် ယိုးဒယားတပ်မှ ဗိုလ်ကြီး ယိုးထင်ဦးစီးအင်အား(၄၀) ယောက်မှေ၇ာက်ရှိပီး ကုန်းမှဖယ်ပေးရန်ပြောကြားမှုကြောင့် ခမရ(၃၅၉) တပ်ခွဲ(၂) တပ်စု(၄)အားဖြည့်တင်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယိုးဒယား တပ်မတော်မှ ခြေလျင်စစ်သည်(၁၀၀) COMMANDO သံချပ်ကာ(၂)စီး M-60 တင့် ၄စီး ၁၂၀ မမယာဉ်တင်စိန်ပြောင်း၂ လက်ထပ်မံရောက်ရှိလာမှု နှစိနိုင်ငံနယ်ခြာပြသနာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တရုတ်ဖြူအားတိုက်ခိုက်စဉ် အိုတောင်ကုန်းအား (OBJECTIVE-7)ဟုသတ်မှတ်ရာမှ အို-၇ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ ပီးထိုတောင်ကုန်းအနီးတွင် ဦးကုသလသီတင်းသုံးသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိသည်။ အို-၇တောင်ကုန်းသည်တာချီိလိတ်မြို့ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ စခန်းကုန်း၏ အရှေ့မြောက် (၂၅၀၀)ကိုက်အကွာတွင် တဘက်နိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ ရှိပီး လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
ယိုးဒယားစစ်တပ်၏ ကိုယ်မန်ဒို ဗီ-၁၅၀ သံချပ်ကာယာဉ်
၁၂၀မမ ယာဉ်တင် စိန်ပြောင်း
ရန်သူ့ ယိုးဒယားတပ် တိုင်း(၃)လက်အောက်ခံ ခြေလျှင်တပ်(၃၀၀)၊ M-60 MBT (၃)စီး၊ Stringary ligt tank (၂)စီး၊ Commando သံချပိကာယာဉ်(၅)စီး MLRS (၃)စီး၊ ၁၂၀မမ ယာဉ်တင်စိန်ပြောင်း (၅)လက် ၆၀မမ (၄)လက် RPG(၁၂)လက် .၅ စက်သေနက်ကြီး (၆)လက် ပါရှိပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ခမရ(၃၅၉) မှ စစ်ကြောင်း(၂) တပ်စု(၈)စု အင်အား (၂၂၀) ၈၁မမစိန်ပြောင်း (၂)လက် MA-7 (၂)လက် BA-103 လောင်ချာ(၂)လက်၊ MG-3 စက်လက်(၂)လက် နှင့် ပစ်ကူအနေဖြင့် အမှတ်(၀၇၉)အမြောက်တပ်ခွဲမှ (၁၂၀)မမစိန်ပြောင်း (၃)လက် နမ့်စန်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ SUPER GALAP G-4 မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်(၄)စီးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ၁၂၀မမ စိန်ပြောင်း
တပ်မတော်၏ ၈၁မမ စိန်ပြောင်းများ
ထို့နောက် (၁၀၁၀)ချိန် ရန်သူလက်နက်ငယ် လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သံများ ကျဲပါးသွားသဖြင့် အို-၇ ခံစစ်ကုန်းအား လူနှင့် လက်နက်များနေရာချထားခြင်း အမ်အေ-၇နှင့် ၈၁မမစိန်ပြောင်းအား မြောက်ဘက်ဆင်ခြေလျောနေရာတွင် နေရာချထားခြင်း လိုအပ်သည့် ခဲယမ်းနှင့် ရေများ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခဲ့ပါသည်။ (၁၃၀၀)ချိန်တွင် ယိုးဒယားတပ်မှစတင်ကာ အမြောက် တင့်ကား လက်နက်ကြီူများဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်လာသဖြင့် ဗိုလ်ကြီးစောနိုင်ဦးနှင့် ဗိုလ်စောတင်ဝင်းနေရာယူထားစေသော ခံစစ်နေရာများသို့ များစွာကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ (၁၃၁၅)အချိန်တွင် ဗိုလ်နေမျိုးရှေ့ရင်ဆိုင်ကုန်းမှ ယိုးဒယားတပ်အင်အား (၁၀၀)ခန့်တိုက်ခိုက်လာသဖြင့် မိမိမှ ဘီအေ-၁၀၀ စက်လက် များဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ (၁၃၄၀)အချိန်တွင် ၇န်သူများ၎င်းတို့အနောက်ဘက်ဆင်ခြေလျော၇ှိ လိုင်ချီးခင်းမ်ျးဘက်သို့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ ပြီးရန်သူသည် တက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပဲ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ရာမိမိအမြောက်တပ်မှ (၁၅၁၅)အချိန်တွင်ယိုးဒယားလက်နက်ကြီးနေရာများသို့ (၁၂၀)မမ စိန်ပြောင်းကြီးဖြင့် (၁၀၀)ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ (၁၆၀၀)နာရီတွင် တပ်မတော်(လေ)G-4 တိုက်လေယာဉ်(၄)စီးမှ (၁၇၀၀)အချိန်ထိ ရန်သူ့ လက်နက်ကြိးနှု့ အခြေခံ နေရာများ အားပစ်ခတ်တိက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ယိုးဒယားတပ်များမှ(၁၉၀၀)နာရီတွင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားရာတိုက်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ရန်သူ (၆၀) ဦးအလောင်းရရှိ ၊ ရန်သူ့ထံမှအောက် ပါလက်နက်များရရှိခဲ့-
(၁) အမ်-၂၇ စက်လက်(၆)လက်။
(၃) ၄၀မမလောင်ချာ (၅)လက်။
(၄) ဓာတ်ငွေ့ကာမျက်နှာဖုံး (၃၂)ခု။
(၅) ဆက်သွယ်ရေးစက် (၇)လုံး။
မိမိတပ်မှကျဆုံး(၁၅)ဦး ဒဏ်ရာရ(၁၂)ဦး ရန်သူ့ဘက်မှပစ်ခတ်သော ကြောင့်တာချီလိတ်မြို့ မှပြည်သူ (၃)ဦးသေဆုံး (၁၅)ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲတွင်အသက်ကိုပဓာနမထားပဲ ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် တိုင်းပြည်အတွက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အောက်ပါအရာရှိ/စစ်သည်များအား ဆုတံဆိပ်များချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်-
ကြည်း ၂၆၈၅၉ ဗိုလ်ကြီး စောနိုင်ဦး
ကြည်း ၃၁၂၇၈ ဗိုလ် နေမျိုး
အမှတ် ၉၅၇၃၁၅ တပ်သားမောင်စိုး
သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ် အရာရှိ(၂)ဦး စစ်သည်(၇)ဦးရရှိခဲ့ပါသည်။
Myanmar Armour Coprs ထံမှ ကူးယူးထားပါသည်။
Zeus October 19, 2012 at 5:53 PM
2002 ကလဲ O7 မှာထပ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုံးက Cobra Gold 2002 လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ရောပြီး Thai က SSA ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ 2001 အကြွေးကိုကလဲ့စားခြေတာပေါ့ဗျာ။ Tanks, APC အစီး ၂၀ လောက်နဲ့ပစ်ကူပေးပြီး SSA ကတက်သိမ်းတာအင်အားမမျှလွန်းတော့ 2IC တယောက်ကျပြီးဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ကပြန်သိမ်းတော့လဲအရင်းအနှီးအများကြီးပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တပ်မတော်သားတွေစွန့်စားခဲ့ကြပါတယ်။ဲ့ အဲဒီခေတ်ကစိတ်ဓါတ်မျိုးအခုရှားသွားပါပြီ။ ပေါ့ပေါ့နေကိုယ်ခံသွားရပါမယ်။် ခေတ်သစ်တပ်မတော်အရာရှိငယ်များသတိချပ်ကြပါ။
sanaythar October 19, 2012 at 8:45 PM
2001 နဲ့ 2002 ဖြစ်စဉ်နှစ်ခု ကွာခြားမှုကိုသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို မအားလပ်တဲ့ကြားက ဖြည့်ဆည်းရေးသားပေးကြတဲ့ Myanmar Armour Corps နဲ့ komm တို့ကိုလေးစားပါတယ်။ ယိုးဒယားက MLRS တွေကောပါဝင်ပေမယ့် သုံးသွားသလား။ သူတို့ဘက်က F16 တွေတက်လာတယ်။ တာချီလိတ်ပေါ်ပျံတယ်ဆိုတာ 2001 လား 2002 လား အစ်ကိုများဖြေကြားပေးကြပါဦး။
aungaung October 19, 2012 at 11:08 PM
I don't think those jets r f16. according to pictures, they used f4 on this case. but most of our people said f16 when they saw fighter jet. no matter what it is. :)
Zeus October 20, 2012 at 3:40 AM
ကိုစနေသားရေ။ ကျွန်တော်မှတ်မိရသလောက်တော့။ ၂၀၀၁ က Thai F16 တွေ မြန်မာပြည်ကိုတော်တော် ကျုးကျော်ခဲ့ပါတယ်။တြိဂံတိုင်းနယ်မြေမှာကော၊ကမ်းရိုးတမ်းဘုတ်ပြင်းမှကော့သောင်အထိဝင်ရောက်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော် Air Defence များကဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သင်ခန်းစာပေါ့ဗျာ။ နယ်စပ်ဖြစ်စဉ်တွေကြည့်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာserious ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Thai ဘက်က 3rd Army နဲ့သာ ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့တာ၊ ကျန်သူတွေကသိပ်စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ Thai ဘက်ကဖြစ်တာကisolated ပါ။စစ်ဖြစ်ရင်သူတို့ကပိုရှုံးမှာပါ။ ဒီအချက်ကိုမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေး၊စစ်ရေးချိန်ခွင်ညှိုပြီးအနိုင်ယူတတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုအောင်အောင်ရေ။ Thai AF မှာ F4 မရှိပါဘူး။ KORAT Af base မှာရှိတဲ့ USAF မှာလဲ F4 မရှိပါဘူး။
Thai ဘက်ကတော့အခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်။ http://www.acig.org/artman/publish/article_346.shtml
aungaung October 20, 2012 at 6:43 AM
U r right Zeus. I just want to sayf5. Bit of confusing. :) thanks for ur comment.
Mg Han October 21, 2012 at 7:22 AM
သတင်းဟောင်းတွေ ပြန်ရှာတော့ မြန်မာခြေလျင်တွေက အခြား ထိုင်းရွာ တွေ အချို့ကိုပါ သိမ်းလာလို့။ လေတပ်ကို အကူအညီတောင်းတယ်။ အစက f5 တွေပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ F16 သုံးခဲ့တယ်။( နောက်ပိုင်းနယ်မြေတွေထိ ထိုးဖေါက် ချိန်းခြောက်ဖို့) ထိုင်းဘက်က သည်စစ်ပွဲကို မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် သည်တောင်ကုံးကို လိုချင်ရင် ခဏအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ထိ ဆန္ဒရှိကြပုံပါပဲ။ ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်က လက်မခံခဲ့ဘူး။ မြန်မာဘက်က မယ်ဆိုင်ကို ပုံမှန် လက်နှက်ကြီးနဲ့ ပစ်ထည့်လေ့ရှိတယ်လို့လဲ ရေးထားတာတွေ့တယ်။ မြန်မာဘက်က လေကြောင်း သုံးတယ်လို့တော့ မကြားဘူးသလို အထောက်ထားလဲ မတွေ့ဘူးပါဘူး။ ထိုင်းရဲ့ တင့်ကားတွေနဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေက ဘာမှမပါတဲ့ ခြေလျင်တွေကို ထင်သလောက် လွယ်လွယ် ယဉ်မဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ မြန်မာဘက်ကတော့ တင့်တွေ သုံးတယ်ရေးကြပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ရုပ်သံထဲမှာ မြင်ဘူးတာတော့ EE9 တင့်ဖျက်လောက်ကျွန်တော် မြင်ဘူးခဲ့တာပါ။(ဒါလဲ နောက်မှ ဆက်စပ်ယူရတာပါ)
sanaythar October 21, 2012 at 8:37 PM
အဲဒီတုန်းက အမှတ်(၃)လမ်းမပေါ်ကနေ အမြှောက်သယ်ယာဉ်များ အတန်းလိုက်သွားတာ စမြင်ဘူးတာပါ။ အော် ..အဲဒီလောက်တောင်ရှိပါလားလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က Serious ဖြစ်ပြီး Propaganda တော်တော်လုပ်သလောက် သူတို့ဘက်က အမှတ်(၃)တပ်တော်လောက်သာပဲဆိုတာလည်း အခွင့်အရေးယူနိုင်တဲ့ဘက်ကတွေးနိုင်သလို သိက္ခာကျတဲ့ဘက်ကလည်းတွေးနိုင်တယ်ဗျ။ ကိုယ်ကအမျိုးသားရေးလောက်...တင်ပြီးလုပ်သလောက် သူတို့က Border Conflict လောက်ပဲအာရုံထားပုံရပါတယ်။ စစ်ပွဲဖြစ်ရင် စစ်ရေးအားသာသူထက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးသူက ပိုမိုအရှုံးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်။ Thank Ko Zeus ခင်ဗျား။
ဗထူး January 29, 2013 at 4:54 AM
ကျွန်တော်ကတော့် ယိုးဒယားလို့ ဘဲ ခေါ်ချင်ပါတယ် ပြီးတော့်ယိုးဒယားက မြန့်မာ့ငယ်နိင်လို့ ဘဲ ထင်ပါတယ် ပြောတာမှားရင် သည်းခံပေးကြပါ မြန်မာနဲ့ယိုးဒယားနဲ့ စစ်ဖြစ်ရင် သူတို့ က ပိုပြီးအရူံးကြီးမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့်အဖိုးကလဲအငြီမ်းစား တပ်ကြပ်ကြီးပါ မြန်မာနဲ့ယိုးဒယားနဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တုန်းက ယိုးဒယားဘုရင်ကသူ့ သားကိုပြောတဲ့စကားကို ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ် မင်းမြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ရင်ဘယ်နနစ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို အရောက်တိုက်မှာလဲ လို့ မေးတယ် သူ့ သားက သုံးနစ်နဲ့ အရောက်တိုက်မယ်လို့ ပြောတယ် အဲ့တော့သူအဖေမင်းတိုက်ချင်ရင် ငါသေမှတိုက် မြန်မာစစ်သားတွေကဘန်ကောက် ကိုသုံးလ အတွင်းရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် အဲ့စကားကိုယိုးဒယားမှာ ရှိတဲ့ကျွန်တော့်အဘိုးက ပြောပြခဲ့တာပါ ဒီလောက်ဆိုရင်ယိုးဒယားတွေ မြန်မာကို ဘယ်လောက်ကြောက်လဲ ဆိုတာသိလောက်ရောပေါ့ ကျွန်တော်ပြောတာ အပြောမတတ်ရင်တောင်းပန် ပါတယ်နော် ဝေဖန်နိင်ပါတယ်ဗျာ
linnlat tayza January 12, 2015 at 3:20 AM
ကိုဗထူးရေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ကျနော်လည်းအဲလိုပဲထင်တယ် ရာဇဝင်လည်းရှိခဲ့ပါတယ် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကတည်းကနော
Zaw Zaw Aung March 11, 2016 at 9:12 AM
ရွှေရောင်ပစ်မှတ်ဇာတ်ကားကို ကြည့်ချင်လို့ပါ။ မကြည့်ဖူးလို့ပါ။ ရှိရင် link လေးပေးကြပါအုံး။